Isitudiyo sanamhlanje 3 Kwiziko Lesixeko, (60 m ukusuka elwandle) - I-Airbnb
Isitudiyo sanamhlanje 3 Kwiziko Lesixeko, (60 m ukusuka elwandle)
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguThomas
Zive usekhaya, kude nekhaya...!! NdinguThomas kwaye ndikuvuyela kakhulu ukukunika ISTUDIYO SALE MIHLA esineebhalikhoni ezimbini ezikwindawo entle, etofotofo, ecocekileyo nexhotyiswe ngokupheleleyo embindini weIgoumenitsa. Nazo zonke eziimitha eziyi-60 ukusuka elwandle. Iivenkile zokutyela ezininzi, iimarike ezibalaseleyo, iibhari, iikhefi, iivenkile, iindawo ezinokubukwa zikwindawo yethu. Bonke abantu bamkelekile kwiflethi yam! Ngaba unayo nayiphi na imibuzo? Sichazele nje ngoAirbnb okanye ubhukishe ngoko nangoko! :-)
Isitudiyo esitsha, esinezinto zonke, esitofotofo, esitofotofo embindini weIgoumenitsa. Iikhilomitha eziyi-60 kuphela ukusuka elwandle kunye neemitha eziyi-50 ukusuka kuzo zonke iikhefi, iibhari, iibhanki, iivenkile zokutyela kunye neemarike eziphezulu. Kwiziko kodwa kuthule kakhulu ukuphumla. Enye indlela efanelekileyo yeendwendwe!Indawo yokugcina ibhayisekile yakho okanye isithuthuthu ngaphandle kweflethi iyafumaneka (indawo kawonke-wonke) !Izilungele izilwanyana zasekhaya, ikati okanye indlu yenja isoloko ifumaneka, kumhlobo wakho onemilenze emine ethandekayo! (Ukuhlamba iimpahla nokugcina ibhayisekile simahla) :)
4.61 · Izimvo eziyi-46
Kwindawo ephakathi ye-Igoumenitsa. Iikhilomitha eziyi-60 ukusuka elwandle, iimitha eziyi-50 ukusuka kuzo zonke iikhefi, iibhari, iibhanki kunye neemarike ezinkulu njl. Iikhilomitha eziyi-350 ukusuka kwizibuko ukuya eCorfu, iimitha eziyi-350 ukusuka kwisikhululo sebhasi esikhulu (KTEL) kunye neekhilomitha eziyi-2 ukusuka kwizibuko elingaphandle ukuya eItali.2 km ukuya kunxweme olumangalisayo lwaseDrepanos, iikhilomitha eziyi-12 ukuya ePortugal, iikhilomitha ezingama-24 ukuya eSyvota kunye neekhilomitha eziyi-35 ukuya eParga.
Ukonwabele ukuhlala kwakho kwistudiyo kwaye ndifumaneka xa ndifunwa. (Andihlali kwi-apartement)
Inombolo yomthetho: 00000291439
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Igoumenitsa